မိန်းကလေးတွေက ရွယ်တူ/အငယ်တွေထက် ကိုကိုမှကိုကိုဖြစ်နေရတဲ့ အကြောင်းအရင်း (၅)ချက် - Achawlaymyar
အခုနောက်ပိုင်းမှာ ကိုယ်နဲ့သက်တူရွယ်တူတွေ ၊ မောင်လေးတွေထက်စာရင် ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့ ကိုကိုတွေနဲ့ပဲ ချစ်သူဖြစ်ချင်ကြတဲ့မိန်းကလေးတွေ ပိုများလာပါတယ် ။ ကိုကိုတွေကိုတော့ မိန်းကလေးတွေက အချက် (၅)ချက်ကြောင့်ရွေးချယ်လာကြတာပါ ။ ဒီအချက်လေးတွေကတော့ ….
၁. ကိုကိုတွေက လုံခြုံမှုပေးတယ်
မိန်းကလေးအများစုက ကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲဖော်ကို ကိုယ်မှီခိုအားထားလို့ရမယ့်သူမျိုးပဲဖြစ်စေချင်ကြတယ် ။ သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာလည်း လုံခြုံမှုပေးတဲ့သူမျိုး ၊ အခက်အခဲတွေကြုံလာရင်လည်း ရှေ့ကနေ မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ပေးနိုင်တဲ့ အားကိုးရတဲ့သူမျိုးကိုပဲ ရွေးချယ်ချင်ကြတယ် ။ ဒီလိုအချက်တွေကို ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့ ကိုကိုတွေမှာပဲတွေ့ရတတ်တယ်လေ ။
၂. အလေးအနက်ထားပြီး လေးလေးစားစားဆက်ဆံတယ်
မိန်းကလေးတွေဆိုတာ ကြေကွဲဝမ်းနည်းလွယ်တယ် ။ သူတို့နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အရာတွေအကုန်လုံးကိုလည်း အလေးအနက်ထားစေချင်ကြတယ် ။ဥပမာ – မွေးနေ့တို့ ၊ ချစ်သူသက်တမ်းနှစ်ပတ်လည်တို့ ။ ဒီလိုအရာတွေကို မောင်လေးတွေက အသေးအမွှားလေးတွေဆိုပြီး မေ့လျော့နေတတ်ကြပေမယ့် ကိုကိုတွေကတော့ အလေးအနက်ထားပြီး ပန်းစည်းလေးတွေပို့ပေးတာတို့ ၊ ချစ်သူအတွက် Suprise လုပ်ပေးတာတို့နဲ့ မိန်းကလေးတွေအသည်းကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ကြတယ် ။
၃. ရန်ပွဲတွေကို မရှည်စေဘူး ၊ အလျော့ပေးတယ်
မိန်းကလေးတွေချစ်သူထားရတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းကတော့ ချစ်သူအပေါ်နွဲ့ဆိုးဆိုးချင်တာ ၊ အချော့ခံချင်တာပါ ။ ဒါ့ကြောင့်တစ်ခါတစ်လေ အကြောင်းပြချက်ရေရေရာရာမရှိပဲ စိတ်ကောက်တာတို့ စိတ်ဆိုးတာတို့လုပ်တတ်ကြပါတယ် ။ ဒီလိုအခါတွေမှာ မောင်လေးတွေက ရစ်တယ်ဆိုပြီး ပြန်ရန်ရှာတတ်ပေမယ့် ကိုကိုတွေကတော့ ကလေးလေး စိတ်မဆိုးပါနဲ့ဆိုပြီး အမျိုးမျိုးစိတ်ပြေအောင်ချော့တတ်ကြတယ်လေ ။ ဘယ်လိုကိစ္စ ကြောင့်ပဲရန်ဖြစ်ဖြစ် အလျော့ပေးပြီး အရင်စခေါ်တယ် ၊ ရန်အကြာကြီးဖြစ်ပြီး စကားမပြောပဲပစ်မထားတတ်ကြဘူး ။
၄. ဘဝအာမခံချက်ရှိပြီး ငွေရေးကြေးရေးလည်းပူစရာမလိုဘူး
ကိုကိုတွေအရွယ်ဆိုတာ အလုပ်နဲ့အကိုင်နဲ့အတည်အကျ ။ မောင်လေးတွေလိုလည်း ဂိမ်းတွေအရမ်းမဆော့တော့ဖို့ ၊ အလုပ်လေးအတည်တကျလုပ်ဖို့ မှာစရာမလိုဘူး ။ ကိုယ်စားချင်သမျှလည်း ဝယ်ကျွေးပြီးပူဆာလို့ရသလို ၊ အချိန်တန် အိမ်ထောင်ပြုဖို့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်လည်း နောက်ဆံတင်းနေစရာမလိုတော့ဘူး ။
ပညာရှင်တွေတွေ့ရှိချက်အရ မိန်းကလေးတွေကသက်တူရွယ်တူယောက်ကျာ်းလေးတွေထက်ပိုစောပြီး ရင့်ကျက်ကြတယ် ။ ဒါ့ကြောင့်ကိုယ်နဲ့ရွယ်တူ ၊ ငယ်တဲ့သူတွေနဲ့ ချစ်သူဖြစ်ကြပြီဆိုရင် သူတို့လောက်မရင့်ကျက်သေးတဲ့အတွက် အတွေးအခေါ်တွေကလည်း မတူပဲ ၊ ခိုင်မာပြီးရင့်ကျက်တဲ့စုံတွဲတစ်တွဲဖြစ်ဖို့ဆိုတာ မသေချာပါဘူး ။ ကိုကိုတွေကတော့ အတွေ့အကြုံအရရော ၊ အသက်အရွယ်အရရော ကိုယ်ခံစားနေရတာတွေကို နားလည်ပေးပြီး ကိုယ့်ရဲ့အတွေးအမြင်တွေကိုလည်း နားထောင်ပေးနိုင်တယ် ကောင်းမွန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်အောင်လည်း ကူညီပေးနိုင်ကြတယ်လေ ။
Categories က်မၼာေရး ဗဟုသုတ, အခ်စ္ေရး Post navigation